Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း)
Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ နှာခေါင်းမျက်လုံးနာရောဂါ ( ရာသီအလိုက်နဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွေ့ရတတ်သော) နဲ့ အင်ပျဉ်ထခြင်းလက္ခဏာတွေ သက်သာနိုင်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ်။
Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
စိုထိုင်းဆရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့ဝေးဝေး အခန်းအပူချိန်မှာထားသင့်အပါတယ်။ ဆေးမပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ဖို့ ရေချိုးခန်းရေခဲသေတ္တာစတာတွေထဲမှာ မသိမ်းသင့်ပါဘူး။ အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေလည်း ကွဲနိုင်ပါတယ်။ ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့အတိုင်း သေချာသိမ်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးဝေးမှာ ထားသင့်ပါတယ်။ ရေမြောင်းတွေအိမ်သာစတာတွေထဲကို ညွှန်ထားထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် သွန်ပစ်ခြင်းမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့နေ့ရက်ကျော်သွားပြီဆိုရင် သို့ ်မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင် သေချစွန့်ပစ်သင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစိတ်ချလက်ချစွန့်ပစ်နိုင်လဲဆိုတာတွေကို ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Bilaxten® သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ketoconazole or Erythromycin
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၁၂နှစ်အထက်လူနာတွေအတွက် တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ဆေးပြားတစ်ပြား
ကလေးတွေအတွက် Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Bilaxten (ဘိုင်လတ်စ်တန်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 29, 2017
Bilaxten®. http://www.mims.com/malaysia/drug/info/Bilaxten/drug-interactions. Accessed February 26, 2017